आईफोन–८ सेप्टेम्बर १२ मा, अरू के-के ल्याउँदै छ एप्पलले ?
२o७४ भदौ १४ बुधबार
लण्डन । प्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी एप्पलले एकैसाथ तीनवटा आईफोनसहित पाँचवटा एप्पल प्रडक्ट आगामी सेप्टेम्बर १२ मा ल्याउने भएको छ । वालस्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार एप्पलले ठूलो इभेन्ट आयोजना गरी ती उत्पादनहरु सार्वजनिक गर्नलागेको हो ।
खास गरी इभेन्टको आकर्षण आईफोन ८ हुने भए पनि ब्लुमबर्गका अनुसार एप्पलले आईफोन ८, आईफोन ७एस, आईफोन ७एसप्लस, एप्पलवाच र एप्पल टिभी स्ट्रिमिङ बक्स लञ्च गर्नेछ । रिपोर्टमा लेखिएको समाचारअनुसार एप्पलपार्कको स्टिभ जब्स थिएटरमा इभेन्ट हुनेछ, त्यहाँ नभए बिल ग्राहम सिविक अडिटोरियमलाई विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ ।
सूत्रहरुलाई उद्धृत गर्दै वालस्ट्रिटले लेखेको समाचारअनुसार एप्पलले तीनवटा फरक फरक आईफोन सार्वजनिक गर्नलागेको हो । विशेष गरी इभेन्टको आकर्षण भने आईफाने ८ नै हुनेछ, जुन अन्य मोडलको तुलनामा महंगो त छँदै छ, एजटुएज डिस्प्ले र अनुहार पहिचान गर्नसक्ने प्रविधिको समेत सुविधा हुनेछ ।
त्यसबाहेक एप्पलले इभेन्टमा एलटीई सेल्युलर चिपवाला नयाँ एप्पल वाच सार्वजनिक गर्नेछ । यो घडीले वायरलेस सेवाबाट सिधा डाटा एक्सेस गर्नसक्ने गरी निर्माण गरिएको छ । यो घडीले कल गर्ने, इमेल वा म्यासेज गर्नको लागि आईफोनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्नेछ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार आईफोन८ को मूल्य एक हजार डलर अर्थात् एक लाख नेपाली रुपैयाँको आसपासमा हुनेछ । यद्यपि यसको सबैभन्दा धेरै मेमोरी भएको फोनलाई भने १४ सय डलर अर्थात् करिब डेढ लाख पर्नसक्ने बताइएको छ । दाबी गरिएअनुसार इभेन्टमा चार हजार एप्पल टीभी लञ्च हुनेछ ।
आईफोनको सेक्युरिटी लुपहोल बन्द गर्दै एप्पल, प्रहरीले समेत अनलक गर्न नसक्ने !
युरोप । चर्चित स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले उपयुक्त कानुनी प्रक्रियाविना आफ्ना आईफोनहरु अनलक नहुने गरी सेक्युरिटी लुपहोल (अनलक गर्न बनाइएको बाटो) हरु बन्द गर्ने भएको छ । योसँगै सुरक्षाअधिकारीहरुले समेत
एप्पल आईओएस १२ : आईफोनमा अहिलेसम्मकै ठूला फिचरहरु ल्याउने एप्पलको घोषणा
काठमाडौं । एप्पलको वल्र्डवाइड डेभलपर्स कन्फरेन्स अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा सोमबारदेखि सुरु भएको छ । यो सम्मेलन ८ जुन अर्थात् शुक्रबारसम्म चल्नेछ । सोही मौकामा उत्कृष्ट स्मार्टफोन निर्माण गर्दै आएको अब्बल कम्पनी
एप्पलद्वारा कम्पनीका सबै कार्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग
प्रविधि । चर्चित कम्पनी एप्पलले सोमबार आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरुमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले यसलाई कोशेढुंगाको रुपमा लिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा पूर्ण भर परेको भन्दै
इसाराले चल्ने फोन बनाउँदै एप्पल, डायल गर्न औँलोले मोबाइल छुनु नपर्ने !
काठमाडौं । चर्चित प्रविधि कम्पनी एप्पलले आईफोनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने भएको छ । उसले भविष्यमा आईफोनलाई टचलेस र इसाराबाटै फोन चलाउन मिल्ने तथा कभ्र्ड स्क्रिनयुक्त बनाउने भएको हो । यसबारे अहिले
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटायो
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : आर्थिक क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास
वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई थप एफपीयोका लागि स्वीकृति
संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत
भूक्षयीकरण नियन्त्रण गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो
यति एयरलाइन्सको जहाज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो
नेप्सेमा दोहोरो अंकले गिरावट, आठ समुहले गुमाउँदा एउटा समुहले कमायो